Friday, December 14th, 2018 - 01:26:05
Sirta Qarsan ee Leicester City ay ku hanan karto Premier League
0 Saturday February 13, 2016 - 10:44:28
Leicester City ayaa hadda ku hoggaamineysa horyaalka Premier League 5-dhibcood oo nadiif ah kaliya waxaa uga haray kulamada Horyaalkana in ay ciyaarto 13-kulan.
Ignacio Camacho oo u duulay Liverpool, Sababtu maxay Tahay?
0 Saturday February 13, 2016 - 10:07:51
Malaga booskeeda dhexe Ignacio Camacho ayaa lagu warramayaa in uu booqday Liverpool xeradeeda Tababarka ee Melwood Toddobaadkan, waxaana lala xiriirinayaa in uu ku biiro Anfield.
Mauro Icardi: Waan maqlay Dalabka Manchester United, balse Inter Milan ayaan sii joogayaa
0 Saturday February 13, 2016 - 09:42:51
Mauro Icardi ayaa shaaca ka qaaday in uu dhegeysan doono dalabaadka Manchester United ee isaga u imaanaya tan io bishii January.
Afar Dalab oo waalli ah ayaa gaaray Neymar
0 Saturday February 13, 2016 - 09:18:32
Neymar ayaa in uu Barcelona ka dhaqaaqo waxaa ay ka dhowdahay in uu sii joogo Camp Nou, marka loo fiiriyo wargeyska Sport.
Lavezzi oo aqbalay inuu u wareego horyaalka Shiinaha
0 Friday February 12, 2016 - 18:13:30
(Kubadbile) Weeraryahanka kooxda kubadda cagta PSG iyo qaranka Arjantiin Ezequiel Lavezzi ayaa aqbalay inuu ka cayaaro horyaalka indhaha caalamka soo jiidanaya ee Shiinaha.
Oscar oo ku faraxsan kooxdiisa kubadda cagta Chelsea
0 Thursday February 11, 2016 - 21:13:25
(Kubadbile) Wiilka qadka dhexe uga dheela naadiga Chelsea iyo qaranka Brazil Oscar ayaa meel iska dhigay wararka la xiriirinaya inuu u dhaqaaqayo horyaalka Shiinaha isagoo muujiyay inuu ku faraxsan yahay kamid ahaanshiyaha kooxda Blues.
Lampard 'Mourinho ayaa soo geba gabeyn kara dhibta heysata Manchester United'
0 Thursday February 11, 2016 - 19:55:27
(Kubadbile) Frank Lampard ayaa aaminsan in macallinkiisii hore Jose Mourinho uu guulo gaarsiin karo dhibtana ka saari karo naadiga Manchester United haddii leylinta kooxdaa uu ka bedelo Louis Van Gaal.
Robben oo aan Guardiola u raaci doonin kooxda Manchester City
0 Thursday February 11, 2016 - 19:43:16
(Kubadbile) Cayaaryahanka reer Holland ee garab weerarka uga dheela kooxda Bayern Munich Arjen Robben ayaa gaashaanka u daruuray in dhamaadka xagaaga macallinkiisa Pep Guardiola uu u raaci doono dhanka kooxda Manchester City.
Chelsea oo Matuidi ka dooneysa kooxda PSG
0 Thursday February 11, 2016 - 15:13:00
(Kubadbile) Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa ka dooneysa dhamaadka xagaaga dhigeeda PSG wiilka dhanka dhexe uga dheela Blaise Matuidi.
Real Madrid Aqbashay Iibinta James Rodriguez, yaa qaadanaya?
0 Thursday February 11, 2016 - 11:19:36
Real Madrid ayaa shaaca ka qaadday in ay tix gelin doonto dalabaadka soo gaaraya laacibkeeda James Rodriguez Dhammaadka xagaagan sida lagu qoray wargeyska, Sport.
Illow Guardiola, Barcelona-da Enrique Rikoorkii ugu Sarreeyay Sameysay, Nuucee? "Sawirro"
0 Thursday February 11, 2016 - 11:17:10
Pep Guardiola waayihiisii Barcelona iska illoow, Rikoorkii Guuldarro la'aanta ee 28-da kulan, hadda waxaa soo baxday Barca Cusub, oo waxaa ay Copa del Rey kulankii xalay usii kordhisay kulamadeeda aan laga badin oo hadda gaaraya 29-kulan.
Everton oo laga iibiyay John Moores Garoon ayuu dhisayaa Ciyaatoyna waa keenayaa "Sawirro"
0 Thursday February 11, 2016 - 10:54:09
In kooxda Everton uu qaato Maal gashade u dhashay Mareykanka, Taageerayaasha waxaa ay geliso qiiro waxayna filayaan darajo wanaagsan hankuna sare ayuu u kacay.
Ogow Labada Ciyaartoy ee Man Utd uga tegaya Mourinho Dartiis
0 Thursday February 11, 2016 - 10:19:51
Jose Mourinho ayaa u sheegi doona Manchester United madaxeeda Fulinta Ed Woodward in uusan Juan Mata iyo Marouane Fellaini midkoodna kala sii shaqeyn doonin Old Trafford.
CARRAGHER: Waan taageeray Go'aanka madaxda Liverpool ee 2-da Sanoo dambe Tikit-ka Bilaash looga dhigay "Sawirro"
0 Thursday February 11, 2016 - 09:58:27
Taageerayaasha Liverpool ayaa Sabtidii tagtay garoonka ka baxay xilli uu kulankaasi marayay 77-daqiiqo, iyagoo si caro leh uga jawaabayay qiimaha Tikit-ka kooxda oo aad sare ugu kacay.
Newcastle United oo dooneysa inay u dhaqaaqdo Carrick
0 Wednesday February 10, 2016 - 21:28:27
(Kubadbile) Kooxda kubadda cagta Newcastle United ayaa dooneysa in dhamaadka xagaaga ay u dhaqaaqdo soo xero gelinta laacibka qadka dhexe uga dheela Red Devils Michael Carrick.
Griezmann oo u deyriyay Chelsea doonayana inuu ka sii dheelo La Liga
0 Wednesday February 10, 2016 - 21:04:57
(Kubadbile) Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa gaashaanka u daruuray wararka la xiriirinaya in dhammaadka xagaagan uu ka socdo horyaalka La Liga.
Nasri oo jecleysanaya in xirfadiisa kubadda cagta uu ku soo geba gabeeyo kooxda Manchester City
0 Wednesday February 10, 2016 - 20:48:31
(Kubadbile) Wiilka qadka dhexe uga dheela kooxda kubadda cagta Manchester City Samir Nasri ayaa muujiyay jaceylka ah inuu doonayo in gebi ahaanba xirfadiisa kubadda cagta uu ku soo geba gabeeyo kooxda Manchester CIty.
Szczesny oo weerar ku qaaday saxaafadda oo si joogto ah wax uga qora
0 Wednesday February 10, 2016 - 13:45:46
(Kubadbile) Goolhayaha kooxda kubadda cagta Arsenal Wojciech Szczesny ayaa aad u canbaareeyay bahda saxaafadda oo beryihii u danbeeyay isaga aad uga hadlayay.
Klopp oo Boorriyay soo laabashada Sturridge
0 Wednesday February 10, 2016 - 12:24:14
Jurgen Klopp ayaa aad uga hadlay guul darradii Liverpool, ee FA Cup ka haristiisa taasoo ay sababsatay West Ham, wuxuu meeshaas kusoo dhoweeyay Daniel Sturridge oo Liverpool dib ugu soo laabtay.
Niang waan ka fiirsanayaa ku biirista Leicester City
0 Wednesday February 10, 2016 - 12:14:36
AC Milan Weerarkeeda M'Baye Niang ayaa ku adkeystay in uusan "Ku fekerin" ka tegista kooxdiisa ha yeeshee uu ka fiirsanayo ku biirista Leicester City oo January dalbatay.
« Prev1 ... 286287288289290291292 ... 343Next »